Wararka - Fahmitaanka farqiga u dhexeeya guddiga aluminium iyo PCB
Fahmitaanka farqiga u dhexeeya guddiga aluminium iyo PCB
Waa maxay guddiga aluminium
Aluminiumka aluminiumku waa nooc bir ah oo ku saleysan alwaax la huwiyay oo naxaas ah oo leh shaqo faafidda kuleylka wanaagsan. Guud ahaan, hal guddi wuxuu ka kooban yahay saddex lakab, kuwaas oo ah lakabka wareegga (bireedka naxaasta), lakabka dahaarka iyo lakabka salka birta. Waxay ku badan tahay waxyaabaha nalalka LED-ka. Waxaa jira laba dhinac, hal dhinac oo cadaan ah ayaa la alxamiyay pin hogaaminaya, dhinaca kale waa midab aluminium ah, guud ahaan waxaa lagu dahaadhaa doonaa koollada isku xidhka kuleylka iyo la xiriirida qaybta kala qaadista kuleylka. Waxa kale oo jira guddi dhoobada ah iyo wixii la mid ah.
Waa maxay PCB
Guddiga PCB guud ahaan waxaa loola jeedaa guddiga wareegga daabacan. PCB (guddiga PCB), sidoo kale loo yaqaan PCB, waa bixiyaha isku xirka korantada ee qalabka elektarooniga ah. Waxay soo jirtay muddo ka badan 100 sano; Naqshadeedu badanaa waa naqshadeynta qaabeynta; Faa'iidada ugu weyn ee isticmaalka wareegga wareegga ayaa ah in la yareeyo khaladaadka fiilooyinka iyo shirarka si weyn, loona hagaajiyo heerka otomaatiga iyo heerka wax soo saarka.
Marka loo eego tirada lakabyada looxyada wareegga, waxaa loo qaybin karaa hal guddi, guddi laba dhinac leh, afar lakab, guddiga lixda lakab ah iyo looxyo kale oo wareegyo badan leh. Maaddaama guddiga wareegga daabacan uusan ahayn wax soo saar guud oo dhammaad ah, waa wax yar oo wareersan qeexitaanka magaca. Tusaale ahaan, Motherboard-ka kombiyuutarka shakhsiga ah waxaa loo yaqaan 'Motherboard', laakiin si toos ah looma yiraahdo guddiga guddiga. In kasta oo ay jiraan guddiyo wareeg ah oo ku jira guddiga weyn, haddana isku mid ma aha, sidaa darteed looma baahna in si isku mid ah loo yiraahdo marka la qiimeynayo warshadaha. Tusaale ahaan, maxaa yeelay waxaa jira qaybo IC ah oo lagu rakibo boodhka wareegga, warbaahinta wararku waxay ugu yeeraan guddiga IC, laakiin dhab ahaantii, uma dhigmo guddiga wareegsan ee daabacan. Waxaan badanaa tixraacnaa guddiga wareegga daabacan sida loox qaawan - taasi waa, guddiga wareegga oo aan lahayn qaybta sare.
Farqiga u dhexeeya guddiga aluminium iyo guddiga PCB
Qaar ka mid ah wada-hawlgalayaasha yaryar ee hadda ku hawlan warshadaha guddiga aluminium, marwalba waxaa jiri doona su'aal sidan oo kale ah. Taasi waa, waa maxay farqiga u dhexeeya guddiga aluminium iyo guddiga PCB. Su'aashan, qaybta soo socota ayaa kuu sheegi doonta sida saxda ah farqiga u dhexeeya labada?
Guddiga PCB iyo guddiga aluminium waxaa loogu talagalay iyada oo loo eegayo shuruudaha PCB. Xilligan, guddiga aluminium ee PCB ku saleysan suuqa guud ahaan guddiga aluminium ee hal dhinac ah. Guddiga PCB waa nooc weyn, guddiga aluminium waa hal nooc oo kaliya guddiga PCB, waa saxan bir ku salaysan aluminium. Sababta oo ah kuleylka kuleylka wanaagsan, guud ahaan waxaa loo isticmaalaa warshadaha LED-ka.
Guddiga PCB guud ahaan waa guddiga copper, kaas oo sidoo kale loo qaybiyaa guddi keli ah iyo guddiga laba geesood ah. Waxyaabaha loo isticmaalo labada u dhexeeya waa farqi aad u muuqda. Qalabka ugu muhiimsan ee guddiga aluminium waa saxan aluminium, iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee guddiga PCB waa naxaas. Aluminiumka aluminiumku wuxuu gaar u yahay qalabkiisa PP. Fasaxa kuleylka ayaa aad u wanaagsan. Qiimaha sidoo kale waa qaali
Marka la barbardhigo labada kuleylka kuleylka, waxqabadka guddiga aluminium ee kuleylka kuleylka ayaa ka sarreeya kan guddiga PCB, iyo kuleylka kuleylka ayaa ka duwan kan PCB, qiimaha aluminiumku waa qaali.